Galaxy Z Fold2: famaritana ny finday avo lenta vaovao avy amin'ny Samsung | Androidsis
Galaxy Z Fold2: famaritana ny smartphone finday vaovao an'ny Samsung
Rehefa natolotra ny taranaka voalohany an'ny Galaxy Galaxy Fold dia efa nanomboka niresaka momba ny taranaka faharoa izahay, taranaka faharoa izay taorian'ny tsaho, volana maro lasa izay, dia ofisialy ihany ny farany. Samsung dia nanararaotra ny hetsika fampisehoana Galaxy Note 20 hanolorana ny Galaxy Z Fold2, taranaka faharoa izay misy fiasa vaovao maro.
Ny taranaka voalohany an'ny Samsung's Galaxy Fold niatrika olana maro, na dia talohan'ny nahatongavany tamin'ny tsena aza tamin'ny alàlan'ny fanamarihana nataon'ny haino aman-jery izay nanararaotra nisedra azy, amin'ny maha-mpiaro ny efijery azy, iray amin'ireo olana goavana amin'izany. Izany dia nanery ny orinasa hanemotra ny fandefasana azy ary hanatsara ny sosona fiarovana.
1 Galaxy Fold vs Galaxy Z Fold2
2 Efijery anatiny lehibe kokoa
3 Efijery ivelany be mpampiasa kokoa
4 Fakan-tsary hiarovana amin'ny fotoana rehetra
5 Fomba fiasa nohavaozina
6 Tsy misy toerana ho an'ny S-Pen
7 Fanatsarana maro raha oharina amin'ny taranaka voalohany
8 Fahafahana sy vidin'ny Galaxy Z Flip2
Galaxy Fold vs Galaxy Z Fold2
Operating System Android 9 Pie miaraka amin'ny UI iray Android 10 miaraka amin'ny UI UI 2.5
Efijery anatiny 4.6 inch HD + Super AMOLED (21: 9) 6.2 inch Full HD
Efijery ivelany 7.3-inch Infinity Flex QXGA + Dynamic AMOLED 7.6-inch Infinity-O QXGA + Dynamic AMOLED FullHD +
processeur Exynos 9820 / Snapdragon 855 Snapdragon 865 +
Tahiry anatiny 512 GB UFS 3.0 512GB UFS 3.0
Fakan-tsary aoriana 16 MP f / 2.2 zoro ultra-wide 12 MP Dual Pixel ny zoro malalaka misy aperture miova f / 1.5-f / 2.4 sy stabilizer sary optika + 12 MP telephoto lens miaraka amin'ny zoro optika avo roa heny sy zoro f / 2.2 64 MP main miaraka amin'ny vava f / 1.8 - solomaso telephoto 12 MP misy f / 2.4 aperture stabilizer optika ary zoom 2x - zoro 16 MP misy zoro f / 2.2
Fakan-tsary eo afovoany anatiny 10 MP f / 2.2. + 8 MP f / 1.9 sensor lalina MP 10 miaraka amina f / 2.2 aperture
Fakan-tsary ety ivelany 10 MP f / 2.2 10 MP f / 2.2.
Conectividad Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS Wi-Fi 802.11 ac USB-C 3.1 5G - Bluetooth 5.1 A-GPS GLONASS Wifi 802.11 ac USB-C 3.1
Fitaovana hafa Mpamaky tanan-tanan-tanana - NFC Mpamaky tanan-tanan-tanana - NFC
bateria 4.380 Mah 4.356 mAh mifanaraka amin'ny famahanana haingana hatramin'ny 15W
lafiny 156.8 × 74.5 × 8.67mm
lanja Gramin'ny 200 Gramin'ny 179
vidiny 1980 dolara-2020 euro Tapa-kevitra
Efijery anatiny lehibe kokoa
Ny fampisehoana anatiny an'ny Z Fold 2 nanala tanteraka ny notch an'ny taranaka voalohany. Samsung dia nisafidy ny hampiditra endrika Infinity-O, misy lavaka eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery misy ny fakantsary anoloana. Io dia namela an'i Samsung hanitatra ny haben'ny efijery ka nampihena ny sisiny, koa amin'ity taranaka vaovao ity, ny efijery anatiny dia 7,3 santimetatra ka hatramin'ny 7,6.
Ity fampisehoana anatiny vaovao ity, manolotra anay ny tahan'ny famelomana 120 Hz, taham-pahavitrihana avo lenta izay nanjary fahita teo amin'ireo laharana an-tariby avo indrindra, na dia mbola misy mpanamboatra aza tsy nampihatra azy, toy ny nitranga tamin'i Apple. Ity tahan'ny famelomana ity dia hampifanaraka ho azy amin'ireo fampiharana ampiasaintsika mba tsy hihena haingana ny bateria. Ny efijery ivelany, ilay 6,3-inch iray, dia manome antsika taham-pahavitrihana 60 Hz.
Ity efijery ity dia mifono an'ilay antsoin'i Samsung hoe Ultra Thin Glass, fiarovana maharitra kokoa amin'ny plastika ampiasaina amin'ny taranaka voalohany ary izany dia efa misy ao amin'ny Galaxy Z Flip izay natomboky ny orinasa tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Efijery ivelany be mpampiasa kokoa
Toy ny vazivazy ny efijery ivelany an'ny Galaxy Fold. Tsy nisy dikany izany fa 4,6 santimetatra fotsiny, satria tsy nanasa ny hampiasa ny smartphone amin'ny efijery ivelany. Avy amin'i Samsung izy ireo dia afaka nanitsy io olana io tamin'ny taranaka faharoa, nanitatra ny haben'ny efijery ka hatramin'ny 6,2 santimetatra, mamadika ny efijery ivelany ho lasa smartphone feno, izay hahafahanao mampiasa ny finday avo lenta amin'ny fotoana maro tsy mila mamelatra azy.
Fakan-tsary hiarovana amin'ny fotoana rehetra
Ny taranaka voalohany an'ny Fold, dia nanolotra maodera fakan-tsary izay nampidirina ilay flash ary ny fakantsary rehetra dia manana vahaolana 12 MP.
Miaraka amin'ity taranaka faharoa ity dia nampihatra Samsung ny modely fakantsary mitovy amin'ilay Note 20, Module izay mampifandray ny tselatra eo anilan'ny fakantsary voalohany ary ao anatin'io andiana io ihany. Ho fanampin'izany, nanitatra ny famahana ny solomaso telephoto ho 64 MP.
Fomba fiasa nohavaozina
Ny Z aforeto 2 mampihatra rafitra hinge iray ihany izay hitantsika ao amin'ny Galaxy Z Flip, izay ahafahantsika mampiasa ny finday avo lenta misokatra, mametraka azy eo ambony latabatra na ambonin-javatra malama mba hiantsoana horonan-tsary, sary amin'ny alina, fotoana fohy ...
Tsy misy toerana ho an'ny S-Pen
Na dia misy aza ny tsaho milaza fa afaka manampy ny S-Pen i Samsung amin'ity taranaka faharoa ity, satria tsy hentitra ny fitaovana anaovana azy, Samsung dia nanapa-kevitra ny hiandry ny taranaka ho avy, raha ny fitaovam-pamokarana ampiasaina amin'ny efijery dia mamela hanome traikefa mitovy amin'ny an'ny tandavan Note. Fantatro ny fanapahan-kevitra, satria raha manolotra antsasakadiny na tsy ampiharina tsy dia tsara, dia tsara kokoa ny mamela azy io ho an'ny kinova ho avy.
Fanatsarana maro raha oharina amin'ny taranaka voalohany
Samsung dia nanaiky nandritra ny hetsika fa tsy vitan'ny hoe nanatsara ny teboka malemy indrindra amin'ny taranaka voalohany izy, fa ankoatr'izay, narahiny ny sosokevitra voarainy na avy amin'ny gazety na avy amin'ny mpampiasa, ny efijery ivelany no teboka manamarika indrindra.
Araka ny hitantsika, Samsung dia nanova ny an'ity taranaka faharoa ity amin'ny alàlan'ny fanampiana Z eo anelanelan'ny Galaxy sy Fold, noho izany ampidiro ao anatin'ny sokajin'ireo finday avo lenta an'ny orinasa Koreana, sokajy efa misy fantsona 2 ao amin'ny katalaoginy.
Ny lanjan'ity taranaka faharoa ity Niala tamin'ny 200 grama ka hatramin'ny 179 grama an'ny Z Fold2. Ohatra iray hafa momba ny asa tsara vitan'ny Samsung amin'ity taranaka faharoa ity, izay, ankoatr'izay, ny valin'ny efijery dia kely noho ny voalohany.
Fahafahana sy vidin'ny Galaxy Z Flip2
Samsung dia tsy nanambara ny vidin'ny fandefasana azy amin'ity taranaka vaovao an'ny Galaxy Fold ity, ary miantso antsika hanombohana azy amin'ny volana septambra hahafantarana ny vidiny ho azony, vidiny izay raha ny tsaho sasany, dia mety ho avo kokoa noho ny taranaka voalohany, zavatra izay ahiahiko manokana tena betsaka, satria ho toy ny mitifitra tongotrao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Galaxy Z Fold2: famaritana ny smartphone finday vaovao an'ny Samsung
Galaxy Tab S7 sy S7 +: famaritana sy vidiny
Samsung Galaxy Note 20: Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ilay tsipika vaovao